ကန်ချနဘူရီ ခရိုင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆောင်ပုဒ်: "แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก" ("ရှေးဟောင်းဒေသ၊ ဘုရားသုံးဆူးစစ်ဆေးရေးဂိတ်၊မနီးကန်ချနဘူရီမြို့နယ်၊ ကွိုင်မြစ်နှင့်တွင်းထွက်ရေတံခွန်များပေါ်တံတား")
၁၉,၄၈၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၇၅၂၂ စတုရန်းမိုင်)
• ထိုင်း (၂၀၁၇)
ကန်ချနဘူရီခရိုင် ( ထိုင်း: กาญจนบุรี အသံထွက် [kāːn.t͡ɕā.ná(ʔ).bū.rīː] မွန်ဍုင်ဝင်္က ) ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် ပြည်နယ်များ တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ဘက်မှ တာ့ခ်၊ ဦးထိုင်းထာနီ၊ စုဖန်းဘူရီ၊ နခွန်းပထုံ နှင့် လှဘူရီ တို့ဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တနင်္သာရီတိုင်း တို့နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းနှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တံတားပေါ်ရှိ ကွိုင်မြစ်ပေါ်မှ ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ မူလက ''ခွဲ'' ဟုစာလုံးပေါင်းထားသော်လည်း ခရီးသွားများမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ''ကွိုင်'' သို့တရားဝင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၈ လူ့အောင်မြင်မှုညွှန်းကိန်း ၂၀၁၇
အေလဝမ်းအမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိ အေလဝမ်း ၇ ဆင့်ရေတံခွန်တွင်အဆင့် ၅
ပြည်နယ်သည်ထိုင်းနိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်တွင် ၁၂၉ ရှိသည်ဘန်ကောက်မှကီလိုမီတာနှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၉၄၈၃ ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာ။ နက်ခွန်းရက်လ်ကစီမာနှင့် ချင်းမိုင်ပြီးလျှင်နိုင်ငံ၏တတိယအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွင်သစ်နှင့်အမြဲစိမ်းသစ်တောများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ခရိုင်သည် ကန်ချနဘူရီ ရှိမယ်လကွန် မြစ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်သောကကွိုင်ရိုင်နှင့်ကွိုင် နို မြစ်များမှမြစ်ဝှမ်းများရှိချိုင့်ဝှမ်းဒေသများဖြစ်သည်။
ဗုံးတီစီစဉ်ထားလျှင်အရေးပါမှုအတွက်အမြတ်ရန်မျှော်လင့်သောနိုင်ငံဖြတ်ကျော်နယ်စပ်အမှတ်ဖြစ်သည် ထားဝယ် ဆိပ်ကမ်းကိုရေနက် စီမံကိန်းအားလမ်းမကြီးနှင့်အကြားမီးရထားလမ်းနှင့်အတူရှေ့ဆက်သွား ဘန်ကောက် နှင့်ဆိပ်ကမ်း။ 
အမျိုးသားဥယျာဉ် များစွာပြည်နယ်၏ တနင်္သာရီတောင်တန်းများ ဖြစ်သော အေလဝမ်၊ စိုင်းယွတ်၊ ခေါင်လန်၊ ထုံဖာပွန်၊ ခေစီနခရင်၊ နှင့် ချလိန်ရက်လ်တနကော်ဆင် တွင်အမျိုးသားဥယျာဉ်များရှိသည်။ အဆိုပါ ထူးယိုင်းနရယ်စွန်ဘေးမဲ့တော သည့်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အအမွေအနှစ် စာရင်း။
ကန်ချနဘူရီတွင်တွေ့ရှိသောရှေးဟောင်းသုတေသနရုပ်ကြွင်းများသည် ၄ ရာစုမှစတင်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများနှင့်ကုန်သွယ်မှုရှိခဲ့သည်။ ကန်ချနဘူရီရှိ ခမာ သမိုင်းလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာသိရှိသော်လည်းနိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံးခမာဆိုဒ်များဖြစ်သော ရာစပ်စင်မြို့ သည်၎င်းတို့နေထိုင်မှုကိုသက်သေထူသည်။
လီယိုရောလ်လင်းမှအင်ဂျင်နီယာလီယိုရောလ်လင်း၏ ကွိုင်မြစ်ကိုတံတား တည်ဆောက်ရန် ၁၉၄၃ မှပုံကြမ်း
ဘုရင် ဖလက်ရန်လ် မတိုင်မီကကန်ချနဘူရီခရိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ သမိုင်းကြောင်းအရမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းသမိုင်းပညာရှင်အချို့ကဖလက်နခွန်းစီးအယုဒီယာ ကာလအတွင်းဤဒေသသည်မြန်မာနိုင်ငံမှကျူးကျော်သည့်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဖနွန်းထိုးခရိုင် တွင်လူ့နှင့်ဆင်အရိုးစုများနှင့်ဓားများကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးထိုနေရာတွင်ဘုရားသရဖူမင်းသားနှင့်အများအားဖြင့်တာဝန်ခန့်အပ်ထားသော ဘုရင်နရေဆွန် စစ်ပွဲနေရာပင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အနီးရှိ စုဖန်းဘူရီ ခရိုင်ရှိဒွန်စေတီ ခရိုင်။
ကွိုင်ကျော်တံတား ကွိုင် မြစ်
နိုင်ငံခြားသားအများစုသည်ကန်ချနဘူရီ၏ မီးရထားလမ်း နှင့်ပတ်သက်သည့်မကြာသေးမီကသမိုင်းကိုအဓိကထားသိကြသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံကိုဂျပန်သိမ်းပိုက်စဉ်က မဟာမိတ်အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်အာရှအလုပ်သမားများအားထိုင်းမြန်မာမီးရထားလမ်းဖောက်ရန်ဂျပန်ကအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်လူ ၁၀၀၀၀၀ ကျော် မဟာမိတ်အင်အား ၁၆၀၀၀ နှင့်ဒေသတွင်းအာရှလုပ်သား ၉၀,၀၀၀သည်ဆိုးဝါးသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများမှသေဆုံးခဲ့သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] [ ကိုးကားရန်လိုအပ်သည် ]
အဆိုပါ ပြည်နယ်၏တံဆိပ်ခတ် သုံးခုပြသထားတယ် စေတီပုထိုး အပေါ် တနင်္သာရီ တောင်တန်း။ သူတို့က“ ဘုရားသုံးဆူ ” ဟုခေါ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံ တောင်တန်းလမ်း ကိုနာမည်ပေးကြသည်။ 
ခရိုင်ပန်းကတော့ ညဥ့်နက်တဲ့ စံပယ်ပန်းကန်နိကာဖြစ်တယ်။ ပြည်နယ်သစ်ပင်သည် မာလမာန်မူ့၊ ဟောမယ်လင်ထိုမယ်သွန်စံ ဖြစ်သည်။
စီရင်စုကြွေးကြော်ချက်မှာရှေးဟောင်းအသိုင်းအဝိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသုံးဆူဖြတ်လမ်း၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ ကေဝါမြစ်၊ သတ္တုနှင့်ရေတံခွန်များဖြစ်သည်။
ကန်ချနဘူရီ ၁၃ ခရိုင်သို့ကွဲပြား ခရိုင်။ အဆိုပါခရိုင်နောက်ထပ် ၉၈ခရိုင်ခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် နယ် နှင့် ၈၈၇ ကျေးရွာပေါင်း ( ရွာ )
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်အထိ  ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကန်ချနဘူရီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ တွန်အ့ဘောရီဘွန်းနှင့်စည်ပင်သာယာ ထဲ့စပန် ဒေသ ၄၉ ခုရှိသည်။ ကန်ချနဘူရီနှင့်ထလေဖလက်ထမ်းတို့တွင်မြို့ မြူနီစီပယ် အဆင့်အတန်းရှိသည်။ နောက်ထပ် ၄၇ ခရိုင်မြူနီစီပယ် စည်ပင်သာယာမဟုတ်သည့်ဒေသများအား SAO နမ့်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပန်းခြံ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၇၂ ခုကအုပ်ချုပ်သည်။
ကန်ချနဘူရီအဓိကဘူတာရုံမှာ ကန်ချနဘူရီ မီးရထားဘူတာ ဖြစ်သည်။
၁၉၁၈ တွင်ဘိုဖလွိုင်အနီးရှိ နီလာ အင်တုံသိုက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကနီလာအဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။   
ကန်ချနပူရီခရိုင်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ် စရစ်လ်တီစရစ်လ်အဘိဓာန်  အကြီးအကျယ်အဆိုပါခဲအာရုံစူးစိုက်မှုကုမ္ပဏီအလေ့အထများအားဖြင့်ညစ်ညူးနေတဲ့ရေလမ်းကုမ္ပဏီအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပျက်စီးမှုများကိုရှင်းလင်းရန်ထိုင်းတရားရုံးကအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ယနေ့အထိ ၂၀၁၉တရားရုံးကသန့်ရှင်းရေးကိုရပ်တန့်ပြီးထိရောက်မှုမရှိဟုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ 
ကန်ချနဘူရီမြင်ကွင်းအများစုသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။ မြန်မာ မီးရထားလမ်း နှင့်သမိုင်းကိုကောင်းစွာမိတ်ဆက်ပေးသော ထိုင်း မြန်မာမီးရထားစင်တာ မှလွဲ၍ ပြတိုက်များသည်ဖုန်ထူပြီးယေဘုယျအားဖြင့်မထိုက်တန်ပါစစ်သင်္ချိုင်း ၂ ခုလည်းရှိသည်။ အများစုမှာ ကန်ချနာဘူရီစစ်သချိုင်း ဖြစ်သည်။
အေလဝမ်အမျိုးသားဥယျာဉ် အနောက်ပိုင်းအတွက် ၅၅၀ ကီလိုမီတာ2ပန်းခြံဖြစ်ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံ ထဲမှာ တနင်္သာရီတောင်ကုန်း ကန်ချနပူရီခရိုင်စီစဝတ်ခရိုင်၊ ကတွန့်ခရိုင်၌တည်၏။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ၁၂ ခုမြောက်အမျိုးသားဥယျာဉ် ဖြစ်သည်။ ပန်းခြံ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုမှာ အေလဝမ် ရေတံခွန်ဖြစ်သည်။ အေလဝမ် အမည်ရှိရေတံခွန်ဖြစ်ပြီး ဟိန္ဒူဒဏ္ဍရီ ခေါင်းသုံးဖြူဆင်ဖြစ်သည်။ ခုနစ်လွှာပါဝင်သောရေတံခွန်များသည် အေလဝမ်နှင့်တူသည်ဟုဆိုကြသည်။  ပန်းခြံတွင်ဥမင်လေးခုရှိသည်။ ထလေဝေါင်ပတန် ရေတံခွန်ဧရိယာအရှေ့မြောက်ဘက်တွင်မြင့်တက်နေသော ရင်ခွင်တောင်တန်းတစ်ခု ခန်းမာန် တွင်ရှိသည်။ 
ထုံဖာပွန်ဥယျာဉ် သည်အမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါပန်းခြံမြောက်မြားစွာရေတံခွန်များနှင့်ဂူရှိပါတယ်။ โชคกระดีนကံကောင်ချူးရေတံခွန်သည် ၃၀ မီတာ (၁၀၀ ပေ) ချောက်ကမ်းပါးနောက်ထပ်ကြီးမားသောရေတံခွန်မှာအဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည့်ခိုင်းယိုင်ဖြစ်သည်။ အခြားပန်းခြံရေတံခွန်များမှာ ကျင့်ယိုင်း၊ မီတင်နှင့် ငွေ့မျင်းတို့ဖြစ်သည်။ တောင်ကလေးဂူတွင် ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပုံများကိုတွေ့ရသည်။ ခေါင်ခါက်လ်ရှုထောင့်ကပန်းခြံအပေါ်မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ 
ခေါင်လန်အမျိုးသားဥယျာဉ် သည် ကန်ချနဘူရီပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတောင်တန်းများ မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသော ထိုင်းနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိစတုရန်းကီလိုမီတာ ၁၅၀၀ ခန့်ရှိသောပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ဒေါန - တနင်္သာရီတောင်တန်းများရှိ အကာအကွယ်ပေးထားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် တစ်ခုဖြစ်သည့် အနောက်ပိုင်းသစ်တောအဆောက်အဦး ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ပန်းခြံသည်ဘန်ကောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ ၃၄၀ အကွာ၊ ကန်ချနာဘူရီခရိုင်ရှိ ခေါင်လန်ရေလှောင်ကန်ကိုဝန်းရံထားသည်။ ၎င်းကိုလမ်းမကြီး ၃၂၃ မှ ဖြတ်သည်။ သစ်ပင်များသည်ရောနှောထားသောရွက်ကြွေများ၊ အမြဲစိမ်းတောင်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအမြဲစိမ်းသစ်တောများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ခေါင်လန်အမျိုးသားဥယျာဉ်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသော ထွန်းယိုင်းနရယ်စွန်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော နှင့်ကပ်လျက် ရှိသည်။ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များသည်ကျားများ၊ ဆင်များ၊ ကျောရိုးများ၊ သမင်ဒရယ်များ၊ ဟောင်နေသောသမင်များနှင့်တောဝက်များပါဝင်သည်။ 
စိုင်းယက်အမျိုးသားဥယျာဉ် သည် စိုင်းယွတ်ခရိုင် အတွင်းရှိအမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်သည်တောင်များ၊ ရေတံခွန်များနှင့်ဂူများရှိရာနေရာဖြစ်ပြီးအနောက်သစ်တောရေးရာအဆောက်အအုံ၏အကာအကွယ်ဖြစ်သည်။ ပန်းခြံ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုများမှာခွန်နွိုက်မြစ်ထဲသို့စီးဝင်သောစိုင်းယိုးရိုင်ရေတံခွန်ဖြစ်သည်။ စိုင်းယဲ့ရဲလက်ရေတံခွန်သည်ခွန်နိုင်တစ်လျှောက်ရှိစိုင်းယိုးရိုင်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။  ပန်းခြံတွင်ဂူမြောက်မြားစွာလည်းပါရှိသည်။ အကြီးဆုံးမှာ ၅၀၀ မီတာ (၁,၆၀၀ ပေ) ထမ်လဝါဖြစ်သည် ဒီဂူရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမှာကြီးမားတဲ့ဂူ ၅ လုံးပါ ဝင်ပြီးတစ်ခုစီမှာ ကျောက်စက်ပနးဆွဲ နှင့် ကျောက်တံတားတွေပါဝင် ပါတယ်။  နောက်ထပ်ဂူစနစ်တစ်ခုဖြစ်သော အနီရောင်ကြယ်ဂူသည် ၁၀၀ မီတာ (၃၃၀ ပေ) ရှည်လျား နှင့် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကြယ်ပွင့်တွင် ဟင့်ငေါ့ယွန်လ်နှင့် ဟင့်ငေါ့ရှစ်ခန်းပါဝင်သည်။
၂၇ ၅၂ ၄၄ ၃၉
၄၉ ၆၇ ၄၉ ၆၃
ကန်ချနဘူရီပြည်နယ်တွင် ထိုင်း၂၀၁၇ တန်ဖိုး ၀.၅၄၅၇ တန်ဖိုးသည်နိမ့်သည်။ အဆင့် ၆၇ တွင်ရှိသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ ထိုင်းနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) သည်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု ညွှန်းကိန်း (ထိုင်း)ကိုအသုံးပြု၍ လူ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုဒေသအဆင့်တွင်ခြေရာခံခဲ့သည်။ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်အဖွဲ့ (NESDB) ၂၀၁၇ ကတည်းကဒီတာဝန်လွှဲပြောင်းယူထားပါတယ်
၄၅ - ၆၀ "အတန်ငယ်နိမ့်"
ထိုင်းအစိုးရမှအစီရင်ခံစာများအချက်အလက်များသည်မူပိုင်ခွင့်မပြုနိုင်ပါ (ပြည်သူ့ဒိုမိန်း) မူပိုင်အက်ဥပဒေ ၂၅၃၇ ၁၉၉၄၊ အပိုင်း ၇။
↑ รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ.2561 (in Thai) (31 December 2018)။ 14 June 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Table A1-1-1a. Prospective projects in Mekong sub-region။
↑ Number of local government organizations by province။ Department of Local Administration (DLA) (26 November 2019)။ “2 Kanchanaburi: 1 PAO,2Town mun., 47 Subdistrict mun., 72 SAO.”
↑ Rattanachart Mining Company။ November 13, 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 Sep 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bo Phloi Sapphire။ 21 Sep 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sapphires from Thailand။ September 2, 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 Sep 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thailand: Clean Up Klity Creek။ 11 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ THE NATIONAL PARKS and other Wild Places of THAILAND။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ National Parks in Thailand: Thong Pha Phum National Park 204။ Department of National Parks (Thailand) (2015)။ 26 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "DNPpdf" defined multiple times with different content
↑ THE NATIONAL PARKS and other Wild Places of THAILAND။ New Holland Publishers (UK) Ltd။ 2001။ pp. 42–44။ ISBN 9781859748862။
↑ Lonely Planet Thailand (14th ed.)။ Lonely Planet Publications။ February 2012။ pp. 184။ ISBN 978-1-74179-714-5။
Wikivoyage ရှိ ကန်ချနဘူရီ သို့ ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ
ပြည်နယ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ် (ထိုင်းဘာသာသာ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကန်ချနဘူရီ_ခရိုင်&oldid=707480" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။